Xisbiga Waddani oo soo gaba-gabeeyey 'tartan ciyaareed Hargeysa'
Waxay dhaliilo u jeediyeen xukuumadda
Hargeysa(GNA)Xisbiga Waddani ayaa soo gabagabeeyey tartan ciyaareed bishii Ramadaan ka socday Xaafada Masalaha ee Magaalada Hargeysa.
Tartankan oo qayb ka ahaa tartamo-ciyaareedyo Xisbigu u qabto Kooxaha dalka ka dhisan bisha Ramadaan iyo wakhtiyada kale, ayaa Kooxdii ku guulaystay waxa la guddoonsiiyey abaal-marino iyo Koob.
Munaasibada lagu soo gabagabeeyey tartankan, ayaa waxa ka qayb-galay Xoghayaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xisbiga Waddani Yoonis Axmed Yoonis iyo masuuliyiin kale oo ka socday hogaanka iyo madax-qaybeedyada Xisbiga.
Masuuliyiintan, ayaa amaan iyo bogaadin u jeediyey Kooxihii ka qayb-galay tartankan, waxaanay kula taliyeen inay sii wadaan xirfada ciyaaraha, kana dheeraadaan Balwadaha, qabyaaladq iyo dhaqannada kale ee dib-u-dhaca nololeed ku keenaya.
“Mahadi waxay u sugnatay Alle swt oo noo suurto galiyay in aanu ku guulaysano inuu tartanku si qurux badan noogu dhamaado mar labadka waxa aan isna u mahad celinaynaa musharaxa dhalinyarada Somaliland ee xisbiga Waddani mudane Cabdiraxman Cirro oo ay marwalba ka go’antahay inuu dhiiri-gelinayo dhalinyarada Somaliland”sidaas ayuu munaasibada ka sheegay Xoghayaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xisbiga Waddani Yoonis Axmed Yoonis oo xaflada ka hadlay.
Waxa kale oo munaasibada ka hadlay xubno ay kamid yihiin Xuseen Axmed Caydiid, Cabdilaahi Daamur iyo Guddoomiyaha Garabka dhalinyarada Xisbigaas Maxamed Sidiiq Dhame, kuwaasoo hambalyo u diray Kooxaha ka qayb-galay tartanka.
Ugu dambeyn waxay sheegeen inay Xukuumaddu ku fashilantay inay dhalinyarada Xaafadan u qabato tartan Ciyaareedyo si kor loogu qaado xirfaddooda Ciyaareed kor loogu qaado.
Previous: Somaliland: 9 qorshe oo lagula dagaalamayo Musuqmaasuqa iyo Qishka Imtixaanka Shahaadiga ah
Next: Gudoomiyaha Xisbiga Waddani Oo Ka Soo Laabtay Safarkii Barakaysnaa Ee MAKKA Xukuumadana Ugu Baaqay Inay Dhamaystirto Lacagta Doorashada